सुनको भाउ बढ्यो – " सुलभ खबर "
काठमाडौँ । आज नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको भाउ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा ४ सय रुपैंयाँले बढेको हो ।
महासंघका अनुसरा आज छापावाल सुन ९७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै, आज तेजावी सुन तोलाको ९६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा १० रुपैयाँले बढेर १ हजार ३३० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
युनाईटेड इदी मार्दी एण्ड आरबि हाइड्रोपावरले असोज ७ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने
युनाइटेड इदी मार्दी एण्ड आरबि हाइड्रोपावर कम्पनीले असोज ७ गतेदेखि स्थानिय बासिन्दाका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्र कास्की जिल्लाको आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दाका लागि ४ लाख २० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द मिति छिटोमा असोज २१ गते र ढिलोमा कात्तिक ६ गतेसम्म रहेको छ । स्थानिय बासिन्दाले कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्ताको लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीले जारी पूँजिको २५ प्रतिशत आईपीओ अर्थात् १० लाख ५० हजार कित्ता निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको हो । जस अनुसार पहिलो चरणमा स्थानियको लागि निष्कासन गरेको हो । दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणको लागि ६ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन हुनेछ ।
कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी बी प्लस (आईएस) रेटिङ प्राप्त गरेको छ । यसले सयममा नै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने कम्पनी मध्यम रुपमा सुरक्षित रहेको देखाउँछ ।
धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा गतआवमा प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ८५ दशमलव ८२ रहेको छ । चालू आवको आव २०७७ / ७८ मा प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ९८ दशमलव ६९ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यस्तै प्रतिशेयर आम्दानी गत आवमा रू. १२ दशमलव ९७ ऋणात्मक रहेको छ भने चालू आवमा रू. ८ दशमलव ३३ धनात्मक पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कम्पनीको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ८ दशमलव शून्य ९ वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टेड लगानी फिर्ता हुने अवधि १४ दशमलव ९६ वर्ष रहेको छ।